Wilaayada Islaamiga ee Jubbooyinka Oo Gurmad Deg deg ah la gaartay Dadka uu saameeyay Fataahaadda Webiga.(Sawirro) – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Wilaayada Islaamiga ee Jubbooyinka Oo Gurmad Deg deg ah la gaartay Dadka uu saameeyay Fataahaadda Webiga.(Sawirro)
On May 22, 2018 186 0
Iyadoo webiga jubba aad u fatahay isla markaana saameeyay dad badan oo ku dhaqan deegaano hoos taga degmooyinka Bu’aale iyo Jilib ayaa gurmad la gaarsiiyay dadka degan tuulooyinka Cawra male iyo Aaminey oo ku yaal duleedka degmada Jilib.
Maamulka Xarakada Mujaahidiinta Alshababaab ee Jubooyinka oo dadaal ugu jira in wixii karaankood ah ay taraan walaalahooda dhibaateysan ayaa dhibanayaasha u geeyay raashin isugu jira bariis, sonkor iyo saliid waxaana dadka loo gurmaday muujiyeen sida ay ugu qanacsan yihiin kaalmada walalahood uga timid.
Sidoo kale qoysaska waxaa la siiyay mara kaneecooyin maadaama kaneecada oo awalba aan laga waayi jirin webiga jiinkiisa xilli roobaadkaan aad u sii korortay.
Ma jiro wax gaadiid ah dhulka ku safri kara webiga fatahay iyo roob badan oo da’ay aawgood sidaa daraadeed gudiga gurmadka loo xil saaray waxay adeegsanayeen doon nooca faara boodka ah.
Wariye ka tirsan Radio alfurqaan oo doonta waxa ka raacay goob joogna ahaa meesha wax lagu qeybiyay waxa uu sheegayaa in dadka deeganada Cawra male iyo Aamineey degan yihiin meelo jir jir ah ama taagag ah oo webiga jiinkiisa ah isla markaan biyaha fatahay iyo kuwa webigu labada dhinacba ka jiraan.
Guryihii dadkaani deganaayeen ayaan waxaa waxaa dhex ceegaga biyo taas ayaaana keentay in bulshadu naf ka raadiyaan meesha yara taagga ah isla markaana ay guryo macmal ah ka sameystaan.
Waalidiinta ayaan habeenkii hurdin si ay caruurta uga ilaaliyaan Yaxaasyada inkastoo iyaga qudhooduba halis ugu jiraan in ay cunaan ama quutaan.
Kumanaan dad ah oo dalagii beerahoodu ku baaba’ay fatahaadda webiga ayaa u baahan gargaar waxayna Allaah ak baryayaan in uu dhibataada ka saaro, dadka muslimiinta ah ee walaalahoodana waxay ka codsanayaan in ay waxay awoodaan ku kaalmeeyaan.
Wilayaada jubooyinku waxay sii wadaa xoojinta qorshaha la xariira u gurmashada dadka fatahaaddu saameysay ee wixii beerahooda ku yiil noqdeen hal bacaad lagu lisay.